Enwere ndụ n'urukpuru? Ee! Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dịghị | Netwọk Mgbasa Ozi
Enwere ndụ n'urukpuru? Ee! Ọ bụrụgodị na ọ dị ka mba
Claudi ego | | Ciencia, Meteorology
Ndụ dị n'urukpuruE nwere otu ihe si na United States chọpụtara na ndụ dị n'ígwé ojii ma e wezụga ihe ndị dị ka mmiri, aerosol, kristal ice, ma ọ bụ ájá. Ọ bụ ezie na a na-enyo ya enyo ogologo oge gara aga, ugbu a enwere ezigbo ihe akaebe na nke a bụ eziokwu n'ihi nnwale ahụ ha mere.
Ee, ọ ga-ekwe omume na site ugbua gawa mgbe anyị leliri anya n’elu igwe ma hụ igwe ojii, agaghị ekwe omume iche na ọbụlagodi n’ime ha enwere ihe ndị dị ndụ. Mana otu ahụ ka ọ dị, ma taa, anyị ga-akọwa etu nke a si eme. N'ihi na ụwa a na-aga n'ihu na-enwe ihe ịtụnanya na ihe ịtụnanya ebe ọ dị ka ihe niile achọpụtala.
1 Kedu onye na kedu ka nnwale ahụ si mee?
2 Olee otú ha si gbagoo ebe ahụ?
Kedu onye na kedu ka nnwale ahụ si mee?
Otu ìgwè na California, San Diego, na US Scripps Oceanographic Institution, were mmiri ozuzo na mmiri kristalized (ice) n'oge ụgbọ elu gafere igwe ojii. Na nyocha a mere, ha chọpụtara na e mejupụtara ha na mgbakwunye na uzuzu uzuzu na ihe ndị ọzọ dị ndụ, site na nje bacteria, fungal spores na ụfọdụ ihe ahịhịa osisi. Nyocha ahụ n'ezie ọ bụ mgbalị iji chọpụta otú ha si emetụta igwe ojii.
Ewere ụgbọ elu C-130 were nyocha ahụ n'igwe ojii. Thegbọ elu ahụ nwere igwe egwu arụnyere na ime ụlọ ice. Ewere nha nke nlele ahụ "nọ n'ọnọdụ", yabụ ọ dị ezigbo mkpa iji chọpụta na nha ahụ ziri ezi na-enweghị ikwe ka ihe ndị ọzọ metụta.
Olee otú ha si gbagoo ebe ahụ?
Otu n'ime nkwubi okwu ndị sayensị ruru bụ ifufe ebili. Dịka ọmụmaatụ, oke ifufe aja nwere ike ibute Eshia, nyere aka guzobe na kristalization nke ụmụ irighiri mmiri na igwe ojii. Ndị a mgbe ha biliri, ha na-ebu uzuzu uzuzu, olee otú anyị si kọwaa, na n'etiti ha otutu ero, nje, wdg. Ya mere, ya mere, mmiri ozuzo nke dakwasịrị na America, nwere ike ibuga nje sitere na Asia.
Anne-Marine Schmoltner nke American National Science Foundation (NFS), ndị bụ ndị nyere ego maka ọrụ a, kwuru, sị: "ugbu a achọpụtala na ọ bụghị naanị na ahịhịa sitere na nri, kamakwa ihe ndị dị ndụ n'onwe ha, na-ekere oke oke na nguzo igwe ojii."
O doro anya na, site ugbu a gaa n'ihu, mgbe ị na-ele anya "n'ebe ahụ," ị ga - ahụ karịa naanị vepo mmiri mechiri emechi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Enwere ndụ n'urukpuru? Ee! Ọ bụrụgodị na ọ dị ka mba
Ahịhịa nwere 30% mmetụta na mmiri ozuzo
Site na mgbanwe ihu igwe a ga-amanye anyị ịkwaga